I-Latchi Holiday Villa EV33 - I-Airbnb
I-Latchi Holiday Villa EV33
Latchi, Paphos, i-Cyprus
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Xenios
U-Xenios unokuphawula okungu-184 kwezinye izindawo.
Leli yi-villa enhle futhi yesimanje yokulala engu-3 enengadi enhle eyenziwe kahle.
Inephuli yangasese, i-jacuzzi hot-tub, ukubukwa kolwandle, i-WIFI yamahhala, i-DVD Player, i-Satelite TV kanye nesiphephetha-moya.
Kulala abantu abangu-6 kanye nomuntu owengeziwe onombhede wokukhempa.
I-villa inefenisha yesimanjemanje ngezinga eliphezulu nempahla ekhethwe ngokucophelela ngosizo lomklami wangaphakathi wosaziwayo uLinda Barker futhi iphelele ngechibi langasese kanye nengadi enomhlaba.
Phansi, i-villa inendawo yokuhlala enohlelo oluvulekile ejabulela ukubukwa okumangalisayo kolwandle kanye nempahla ethambile, i-TV yesathelayithi, isidlali seDVD nendawo yomlilo evulekile. Indawo yokudlela izihlalo 6 kanye nekhishi lesimanje linazo zonke izinto ezisetshenziswayo ezibalulekile ezidingekayo ukuze uhlale unethezekile wokuziphekela. Igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokugezela elihlukile elineshawa nobhavu wokugeza nakho kutholakala phansi.
Izitebhisi zemabula zikhuphukela esitezi sokuqala ukuya kwamanye amagumbi okulala amabili, iwele elilodwa nelinye eliphindwe kabili, womabili anamagumbi okugeza e-en-suite.
Ngaphandle kwe-villa uzothola indawo engadini evulekile nenelanga enechibi langasese elingu-8mx 4m kanye nezinhlobonhlobo zezitshalo nezihlahla. Kunesikhala esanele sokushiswa yilanga kanye nokudla ngaphandle kanye nezitebhisi ezimazombezombe eziholela endaweni evulekile yesitezi sokuqala, lapho ilanga lantambama lingajatshulelwa khona.
Kukhona nezihlalo eziyisi-6 ze-hot tub jacuzzi enamalambu angakwazi futhi ukushisisa ngama-Euro angama-25.
Le villa inhle ngazo zonke izindlela futhi itholakala kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zaseCyprus.
Indawo emangalisayo kanye nokubukwa okumangalisayo kolwandle indawo ezungezile ehlinzekwa izivakashi ezikule ndawo yaseLatchi. Amabhishi, ichweba kanye nezindawo zokudlela zingaphansi kwemizuzu emi-5 uma ushayela futhi idolobha lasePolis elinokukhethwa okwengeziwe kwezindawo zokudlela nezitolo likude ngemizuzu eyi-10.
Indawo ekhangayo yaseLatchi iyidolobhana elihle lokudoba, elaziwa kakhulu ngezindawo zayo zokudlela ezithokomele ezisethekwini namabhishi angenazixuku. Idumile kubo bobabili abavakashi nabendawo, le ndawo inikeza izivakashi ithuba lokujabulela indawo ehamba phambili esiqhingini.
Indawo yokungcebeleka isogwini oluseNyakatho Ntshonalanga yeCyprus, phakathi kwePolis ne-Akamas National Park ebabazekayo. Ugu lolwandle lungaphezu kwemayela ubude namanzi afudumele angashoni kanye nenqwaba yama-sun-loungers kanye nezambulela zokuqashwa. Kunemidlalo eminingi yamanzi etholakalayo ehlanganisa i-jet-skiing, i-parasailing kanye ne-wakeboarding.
Uhambo oluya endaweni aluqedi ngaphandle kokuvakashela i-Akamas National Park. Le ndawo inemizila yemvelo engaphezu kuka-50, kusukela ekuhambeni ngezinyawo okuthambile kuya ezinkambweni ezinde ezidlula emahlathini kaphayini nawejunipha. Omunye umzila uholela emaBhathini ka-Aphrodite, lapho kuthiwa unkulunkulukazi wothando wayevame ukugeza nalapho ahlangana khona nesithandwa sakhe, u-Adonis, lapho eyeka ukuphuza ezingela.
Omunye umsebenzi onconyiwe ngenkathi use-Latchi ukuthatha uhambo kolunye lwezikebhe eziningi ezisuka echwebeni nsuku zonke. Jabulela ukubuka njengoba uhamba ngasogwini oluhle uya eBlue Lagoon, itheku elikhulu elinamanzi acwebile, okuyipharadesi labashushumbisi.
I-Latchi iyindawo ekahle kakhulu yalabo abafuna iholide elipholile futhi inikeza okuthile ezivakashini zabo bonke ubudala.
Ihhovisi lakho lezobudlelwane nezivakashi lizokuza lizokuvakashela ngosuku olungemva kokufika kwakho ukuze liqinisekise ukuthi konke kuhamba kahle. Basocingweni lwezimo eziphuthumayo 24/7
Hlola ezinye izinketho ezise- Latchi namaphethelo